"We Shell Overcome Some day" ငါဒို့တနေ့တော့ အောင်ပွဲခံရမယ်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်သို့ ခရီးမထွက်မီ နာရီပိုင်းအလိုနုစ်သစ်ကြိုဆုတောင်း)"လိုရာဆန္ဒအ၀၀ ကနေ့ ပြည့်စုံကြပါစေ။ ဆတက်တပိုး တိုးပြီးတော့ အများရဲ့ အကျိုး ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ။ သားတို့ သမီးတို့ရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မလို့ အမေတို့ရဲ့ နိုင်ငံကြီးလည်း ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ တိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။ ရွှင်လန်းနိုင်ပါစေ။ အေးချမ်းနိုင်ပါစေ...... "
NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးသွားရောက်မည်
NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ။ (မတ်လ ၁၀၊ ၂၀၁၃)။
အာဏာရ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ အတိုက်အခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ လာမယ့် ရှေ့သီတင်းပတ် ထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ပါတီနှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးအနေနဲ့ သွားရောက်မယ့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအကြောင်း ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရပိုင်းရော အာဏာရ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကပါ မြန်မာဘက်က အစိုးရနဲ့ အာဏာရပါတီတွေအပြင်၊ အခြား နိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ့ ထိစပ် ဆက်ဆံမှုလုပ်လာတဲ့ အခြေအနေ တစိတ်တပိုင်းလို့ ပြောရမှာပါ။ မကြာသေးခင်ကပဲ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီးသစ်နဲ့ အန်အယ်ဒီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၊ အတိုက်အခံပါတီကြီးလို့ ပြောရမယ့် အန်အယ်ဒီနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး အခုလို တိုးမြင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးမှု အမေရိကန်ကြိုဆို
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ယာယီ လက်ထောက် ပြော ခွင့်ရသူ Patrick Ventrell (၁ မတ် ၂၀၁၃)
မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကနေ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၀ ကျော် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ကြိုဆိုလိုက်ပြီး၊ ကျန်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကိုပါ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့ ပြန်လွတ်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ ဗြိတိန်တို့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြထားပါတယ်။
မနေ့တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အထဲ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၅၉ ဦး ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လွတ်ဖို့အတွက် အစိုးရကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း၊ ဒါ ပထမဆုံးအကြိမ် အသုတ်လိုက် လွတ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး ဆက်ပြီး လုပ်သွားမဲ့ပုံရပေမဲ့ စိန်ခေါ် မှုတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး John Kerry က ပြောလိုက်ပါ တယ်။ သောကြာနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဌာနမှာ ပြုလုပ်တဲ့ နှစ်ပတ်လည် လူ့အခွင့် အရေး အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာ ဝန်ကြီး Kerry ကခုလို ပြောကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ အထီးကျန် နိုင်ငံတခု ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာပေမဲ့ အမေရိန်ကန်က ဖြစ်စေချင်တဲ့ အခြေအနေ မရောက်သေးဘူးလို့လည်း သူက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတမှာမဟုတ်လို့ ဒေါ်စုပြော
ဂျပန်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများနဲ့ တိုကျိုမြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံစဉ်။ (ဧပြီလ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၃)။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တော်မှာ ဂျပန်ရောက် မြန် မာမိသားစုတွေနဲ့ စနေနေ့က တွေ့ဆုံမှုအတွင်း အမေးအဖြေလုပ်စဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလို ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“စောစောကလည်း ပထမဦးဆုံးကတည်းက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအကြောင်း ကျမတို့ ပြောပြီးပါပြီး။ အဲဒီအထဲမှာ တိုင်းရင်းသားများအားလုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက ကျမပြောတာ ရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်းများထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါလဲ။ ပါတဲ့သူတွေကို အများပြည်သူကနေ လက်ခံနိုင်ရမယ်ဆိုတာဟာ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးကလည်း ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်ရမယ်။ အဲဒါမှ ကျမတို့က တကယ့်ကိုပြည်ထောင်စု စစ်စစ်ကို ထူထောင်နိုင်မှာပါ။ ဒီ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာရော အပြီး ပြန်လုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ ကျမအမြင်မှာတော့ ၂၀၁၅ မတိုင်ခင်လုပ်မှ ပိုပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ ကျမထင်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးနှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ တွေ့ဆုံ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးနှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံး၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည် ယနေ့ ( ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက် ) ညနေ ၃း ၃၀ နာရီက ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီး Stephen Lillie အပါအ၀င် သံရုံးတာဝန်ရှိသူများဖြစ်ကြသော Thomas Phipps နှင့် Steph Lysaght တို့နှင့် မနီလာမြို့ရှိ ဗြိတိန်သံရုံးတွင် တစ်နာရီခွဲကြာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံကြရာတွင် ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးနှင့် သံရုံးတာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့မှုများကို ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီး ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက သိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။
ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ၁၂း၃၀ နာရီကလည်း (BMFI) Balay Mindanao Foundation မှ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Mr. Kaloy Manlupig နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့ ၊ နု-အက်တလီစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးနေစဉ်။
၁။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၉ခုနှစ် ပြာသိုလဆုတ် ၉ရက် (အင်္ဂလိပ်သက္ကရာဇ် ၁၉၄၈ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ရက်)တနင်္ဂနွေနေ့ ကောင်ြး မတ်သန့်စင် မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောအခါ၌ ဤငါတို့ မြန်မာပြည်သည် လုံးဝ လွတ်လပ်သော အချုပ်အချာ အာဏာပိုင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်သို့ ရောက်ပြီ။
၂။ ဤငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည် လိုရာမတ ပြည့်စုံလှ၍ ဘူမိနက်သန်မှန်သော မြေထူးမြေမြတ်လည်း ဖြစ်၏။ မွန်မြတ်သန့်စင်သော တရားထူးတရားမြတ်တို့တည်ရာ မြေကောင်းမြေမွန်လည်း မှန်၏။ မြေတွင်းမြေပြင် အထူးထူးသော ရတနာအပေါင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသဖြင့် သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ ဆွတ်ယူစားသုံး ကမ္ဘာဆုံးသော်လည်း မသုဉ်းမကုန်နိုင်သော ပဒေသာစစ် အနှစ်သာရ ကြွယ်ဝပြည့်စုံသော မြေလည်းဖြစ်၏။ ဘူမိနက်သန် မှန်လှထူးချွန် ဤမြေမွန်မြေမြတ်၌ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ မြန်မာ စသည်ဖြင့်
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ပထမဆုံး ပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ၅ ရက်ကြာသွားရောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ် လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရရှိဖို့အတွက် သွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူ လိုက်ပါသွားမယ့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပြုံးချိုက RFA ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲက ပြန်လည်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ အခုပြည်တွင်းမှာ တော်တော်များများ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်ပမှာ ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်ကောင်းမျိုးတွေ အတွေ့အကြုံကောင်းမျိုးတွေ ရလာမလဲဆိုတာ လေ့လာမှာဖြစ်တယ်၊ တဖက်ကဖိတ်ကြားတဲ့လူတွေကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကိစ္စတွေမှာ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးတွေကို ဘယ်လိုချဉ်းကပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းကြသလဲ၊ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဘယ်လိုရသလဲဆိုတာကို မျှဝေချင်တယ်"
နှစ်သစ်ဆုတောင်း နဲ့ဒို့ နိုင်ငံ
နှစ်သစ်အတွက် အမှတ်တရ ဘာရေးရင် ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ၊ ခေါင်းထဲမှာ ရေးချင်တာတွေကများလွန်းလို့ ရယ်၊ ဖတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာကတကြောင်းရယ်ကြောင့် ကိုယ်တိုင်မရေးတော့ဘဲ၊ အရင်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ပြီး၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာလေးတွေကို ကောက်နှုတ်ထားတဲ့ စာစုလေးတခုကို ပြန်လည်ဖော်ပြရင်း ရာဇ၀င် စာဖတ် ပရိတ်သတ်အပေါင်းကို နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၁၃ ခု နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုရင်………..
မြန်မာ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းအတွင်း အရက် နှင့် ဆေးလိပ်တို့ကို နေရာဒေသမရွေး အချိန်အခါ၊ အသက်အရွယ်မရွေး ၀ယ်ယူရရှိနိုင်သော တိုင်းပြည်။
နိုင်ငံ့အရေးသည် နိုင်ငံသားတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု အခြေခံဥပဒေတွင် ပါဝင်သော်လည်း ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ တွင် နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာရပ်ကွက်ထောက်ခံစာများ ထည့်ခိုင်းသောတိုင်းပြည်။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ဖို့ ကုလထပ်မံတိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ဘောဒုဖဒုက္ခသည်စခန်းမှ မူဆလင် ဒုက္ခသည်များကို တွေ့ရစဉ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လက ချမှတ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက တနင်္လာနေ့မှာ တညီတညွတ်ထဲ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် တခဲနက်ကြိုဆိုခဲ့ပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေရှိနေသလို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက လူနည်းစုရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေကို စိုးရိမ်စိတ်ပူကြောင်း အတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
၆၇ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးကနေ လူမှုရေး၊ လူသားချင်းစာနာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တတိယကော်မရှင်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်း ချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး တနင်္လာနေ့က စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ ငွေကြေးခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပဉ္စမကော်မတီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့ မဲခွဲစရာမလိုပဲ တခဲနက် အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ညစာစားပွဲပြုလုပ်၊ဗမာတိုင်းရင်းသားများဖိတ်ရမည်ဆိုလျှင်တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များလာရောက်ပါက ဖိတ်မည်ဖြစ်ေ ကြာင်းဆို"
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ၂၂ ရက်နေ့ ညနေတွင် နယူးဇီလန် ၀န်ကြီးချုပ် နှင့်တွေ့ ဆုံပြီးနောက် ၄င်းမှဖိတ်ကြား ထားသော တိုင်းရင်းသား လွှတ်ေ တာ် ကိုယ်စားလှယ် များဖြင့် ညစာစားပွဲ ကို နေပြည်တော် စည်ပင်ရိပ်သာတွင် ညစာ တည် ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
ထို ညစာ စားပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှု နှင့် ပတ်သတ်သော လက်ရှိ လွှတ်တော် အရေးကိစ္စများ၊ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်ရေးအဆိုနှင့် မေးခွန်းများကို ထောက်ခံခြင်း၊ကန့်ကွက်ခြင်းများ၊တိုင်းရင်းသားများ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ညစာစားပြီးချိန်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လွတ်မြောက်လာသော ကိုလက်ျာထွန်းကို နှုတ်ဆက်နေသော ကုိုဂျင်မီနှင့် မနီလာသိန်း
ကိုလှဦး(ABSDF)၊ ကိုသန့် ဇင်၊ ကိုလင်္ကျာထွန်း၊ ကိုနိုင်လင်းအောင်၊ ဦးသိန်းထွန်း(ခ)ကိုသိန်း၊ ဦးမြင့်ဟန်၊ နိုင်အောင်၊ ကိုကျော်သူ၊ ကိုဝင်းသိန်း၊ ကိုကိုနိုင်၊ ကိုကြည်အောင်၊ ကိုမြင့်အေး စုစုပေါင်း ၁၂ဦး သာယာဝတီထောင်မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း သိရသည်။
၂. ကိုသန့် ဇင်
Popular Myanmar Journal
သမ္မတ အိုဘားမား ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမတွင် မိန့်ခွန်းပြောနေသည့် သမ္မတ အိုဘားမား။ နိုဝင်ဘာ ၁၉၊၂၀၁၂
အမေရိကန်သမ္မတ ဘရာ့ခ် အိုဘားမားဟာ တနင်္လာနေ့က မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ဆီ ရောက်သွားပြီး နေ့လည်ပိုင်းက သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မရဘဲနဲ့တော့ ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမျိုးမှ အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သမ္မတ အိုဘားမားက အလေးထား ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းမပြောခင်မှာတော့ သမ္မတအိုဘားမားဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းက နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ် ။
အကြောင်းအရာ အစုံအလင်ကို ပြောဆိုခဲ့တဲ့ သမ္မတရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေ အဆုံးသတ်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ စစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင် စုအနေနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံသွားမယ်လို့လည်း သမ္မတအိုဘားမားက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ
VOA Burmese TV Daily News (နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၂၈-၄-၂၀၁၃)
တပတ်အတွင်း မြန်မာ နဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၊ မြန်မာသတင်း လွတ်လပ်ခွင့် တိုးတက်မှုရှိလာကြောင်း Freedom House ပြော၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူများအကြောင်း သက်တန့်ရောင် သတင်းလွှာ .....
(၂၀၁၃)ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် (နယူးဇီလန်)
၁၂ ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ အော်ကလန်မြို့ မှာ ဧပြီလ (၁၃)ရက်နေ့ က ကျင်းပစဉ်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီစဉ်
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ခြံဝင်း အမှတ် ၅၄ အတွင်း ဂါရ၀ တရားဖြင့် တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် ကြစဉ်။ AFP
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဂျဝါဟာလာနေရူးဆုနဲ့ ဟိုတုန်းက နယူးဒေလီ
(၁၁)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်(ရုပ်သံ)
အော်ကလန်မြို့ ၊ နယူးဇီလန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မြန်မာလူမျိုးစု မြန်မာ့အသံ (Sydney) ဥက္ကဌ ဦးရွှေမြင့် မှရိုက်ကူး တည်းဖြတ်သည်။
The Famous Burmese Classical Musician MAR MAR AYE’s Concert in the evening of Auckland,New Zealand
နယူးဇီလန် အော့က်လန်မြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ဒေါ်မာမာအေး ရဲ့ ဂီတဆည်းဆာည ပဒေသာကပွဲ
“ The Burmese Classic Singer, Mar Mar Aye performinganight concert in Auckland along with New Zealand based Classic lovers, Burmese Traditional Dancers and Auckland Based LIVE Band - The Four Star.
You can send the news, video, photo, article and poem
သတင်း၊ ဆောင်းပါး။ ကဗျာ၊ ဓါတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယို များ ပေးပို့ရန်
4th Anniversary of Saffron Revolution in Burma (Auckland, New Zealand)
Daw Aung San Suu Kyi's 66th Birthday Event in New Zealand
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ အော့က်လန်တွင် ပြုလုပ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အခမ်းအနား
Refugee Stories Symposium Programme
နယူးဇီလန်တွင် အခြေချနေထိုင်သော နိုင်ငံတကာမှ ဒုက္ခသည်များရဲ့ အတွေ့အကြုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ - ရာဇ၀င်)
Daw Suu release from house arrest
ဒေါ်စုလွတ်ပြီ (၁၃၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀)
Boycott Burma's Election 2010 (New Zealand)
နယူးဇီလန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများဧ။် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ
This prison where I live Movie Show
အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့က နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ အော်ကလန် တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်သော ကိုဇာဂနာ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ပြပွဲ
Ko Aung Khing Min talks current situation and unfare election 2010 in Burma (Auckland University)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ကိုအောင်ခိုင်မင်း မှ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအခြေအနေနှင့် နအဖ က ဦးဆောင်ကျင်းပပေးသော ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်။
Ko Aung Khing Min talks current situation and unfare election 2010 in Burma (NZ Parlianment)
နယူးဇီလန်ပါလီမန်တွင် ပြုလုပ်သော မြန်မာ့အရေးကြားနာပွဲ
Burma VJ Show in Auckland University
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသုံးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဗားမားဗီဂျေး ရုပ်ရှင်ပြပွကြို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ အော်ကလန်မြို့ရှိ အော်ကလန်တက္ကသိုလ်တွင် ပြသသည်။ ထိုပွဲကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ ( နယူးဇီလန်)က ကြီးမှူးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
Special Video message from Daw Aung San Suu Kyi on the 8888 Memorial Day in New Zealand.
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲလ်ဆုရှင် နှင့်မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ/ အော်ကလန်မြို.တွင်ပြုလုပ်သော(၂၃)နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့ သော ဗွီဒီယို မိန့် ခွန်း။
Burmese Social Welfare Association's Images
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိ မြန်မာလူမှုရေးအသင်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ
"There will be change because all the military have are guns" (Daw Aung San Suu Kyi)
ကျနော်ရေးဆွဲတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည် ပုံပါတဲ့ ပန်းချီကား
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု
1 US Dollar = 822 Kyats အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာ = မြန်မာငွေ ၈၂၂ ကျပ် October 8, 2012
Bogyoke Aung San's Speech
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်း (အားလုံးနားဆင်ရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။)
"International Community Must Take
မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(နယူးဇီလန်) BCNZ ဧ။် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
Daw Aung San Suu Kyi's Speech at NLD-HQ
ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်မိန့်ခွန်း (NLD)နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်
ရာဇ၀င်ဘလောက် (YAZAWIN BLOGS) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်သည်။(Copyrigh@yazawon.blogspot.com). Theme images by Barcin. Powered by Blogger.